Ndị ọkwọ ụgbọala | December 2019
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka AMD Radeon HD 7600M
AMD Radeon HD 7600M Series bụ usoro nke kaadị vidiyo ndị a kwadoro maka ntinye na nke obere laptọọpụ ndị na-egwu egwu. Ka onye ọrụ wee nwee ike ịghọta ikike zuru oke nke kaadị ndị a, a chọrọ ụlọ ọrụ ịkwọ ụgbọala. Enwere ike ime nke a n'ụzọ dịgasị iche, na n'isiokwu a, anyị ga-atụle 4 nhọrọ maka ịrụ ọrụ ahụ.
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka AMD Radeon HD 6450
Ka iji kaadị vidiyo jiri ike ya nile rụọ ọrụ, ọ dị mkpa ịhọrọ ndị ọkwọ ụgbọala ziri ezi maka ya. Ihe mmụta taa bụ banyere ịhọrọ ma wụnye software na AMD Radeon HD 6450 eserese kaadị. Họrọ software maka AMD Radeon HD 6450 N'isiokwu a, anyị ga-atụle ụzọ dị iche iche ị nwere ike ịchọta ngwa ngwa niile maka ngwanrọ vidiyo.
Onye na-akwọ na kaadị netwọk - esi esi wụnye ya, ma ọ bụrụ na ọ wụghachị Windows ọ nweghị Intanet?
Ndewo Echere m na ọtụtụ ndị nabatara Windows maka oge mbụ maara ọnọdụ ahụ: ọ dịghị Intanet, n'ihi na ọ dịghị onye ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ na kaadị netwọk, ma ọ dịghị ndị ọkwọ ụgbọala - ebe ọ bụ na ha kwesịrị ibudata, na nke a, ịchọrọ ịntanetị. N'ozuzu, oke egwu ... Ihe yiri nke a nwere ike ime n'ihi ihe ndị ọzọ: dịka ọmụmaatụ, ha mere ka ndị ọkwọ ụgbọala ahụ dị ọhụrụ - ha agaghị (ha chefuru iji mepụta ndabere ...); ma ọ bụ gbanwee kaadị netwọk (nke ochie "nyere iwu ka ị dị ndụ ogologo oge," ọ bụ ezie na, na-emekarị, na kaadị ọhụrụ ahụ na-abịa na ọkwọ ụgbọ ala).
Kedu ka esi budata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na ... 5 nkeji?! Ahụmahụ aka
Ndewo Mgbe ịchisịrị Windows ma ọ bụ jikọọ akụrụngwa ọhụrụ na kọmputa, anyị nile na-eche otu ọrụ ahụ - ịchọta na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala. Mgbe ụfọdụ, ọ na-enyo ghọọ ezigbo nro! N'isiokwu a, achọrọ m ịkọ ahụmahụ m, na ngwa ngwa ma ngwa ngwa i nwere ike ibudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na kọmputa ọ bụla (ma ọ bụ laptọọpụ) n'ime nkeji (n'ọnọdụ m, usoro ahụ dum dị ihe dị ka minit 5-6!
Maka ohere dị mfe ịnweta Ịntanetị ma ọ bụ ịmepụta netwọk mpaghara site na PC ma ọ bụ laptọọpụ, ị chọrọ nkwụnye Wi-Fi dị elu ma dị elu. Ma ngwaọrụ dị otú ahụ agaghị arụ ọrụ na-enweghị ngwanrọ, yabụ ị ga-achọ ịmụta ihe niile maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka TP-Link TL-WN721N. Ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala maka TP-Link TL-WN721N Mgbe mkpofu onye ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ụzọ na-ekwenye na nrụnye nke ọkwọ ụgbọala ahụ maka eriri Wi-Fi.
Etughari NVIDIA kaadị ọkwọ ụgbọala vidiyo
Kaadị vidiyo bụ otu n'ime akụkụ kacha mkpa nke kọmputa ọ bụla, n'ihi na ọ bụ ya bụ onye na-ahụ maka igosipụta onyinyo ahụ na ihuenyo. Ma ngwaọrụ a agaghị arụ ọrụ siri ike ma nwee ike zuru oke ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye ọkwọ ụgbọala ọ bụla n'ime usoro ahụ. Ọzọkwa, n'ọnọdụ ndị dị ntakịrị, ọ bụ nwelite ngwanrọ nke na-akpata ụdị nsogbu niile - njehie, malfunctions, na arụ ọrụ na-ezighị ezi nke kaadị ndịadị.
Nduzi ọkwọ ụgbọala maka NVIDIA GT 640
A otutu adabere na kaadị vidiyo na kọmputa: otu esi egwu egwuregwu, ọrụ na mmemme "arọ" dị ka Photoshop. Ọ bụ ya mere software maka ya bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa. Ka anyị chọpụta otú ị ga-esi wụnye ọkwọ ụgbọ ala ahụ na NVIDIA GT 640. Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka NVIDIA GT 640 Onye ọ bụla nwere ọtụtụ ụzọ iji wụnye ọkwọ ụgbọala na ajụjụ.
Echichi dị ọcha nke Windows, yana ntinye ihe ọhụrụ ngwaike na PC, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ ga-achọ ma gbakwunye ndị ọkwọ ụgbọala dị iche iche na usoro ahụ. Kaadị vidiyo, dịka otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke kọmpụta na kọmpụta nke oge a, chọrọ nhazi nke components iji nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma nke kachasị ihe niile.
Ịwụnye ọkwọ ụgbọala ọ bụla maka ihe ntanetị Samsung
Samsung emewo ka a tọhapụrụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ, gụnyere ndị nbipute ụdị dị iche iche. N'ihi nke a, mgbe ụfọdụ, ọ dị mkpa ịchọọ ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị, nke, ọzọ, anaghị ejikọta ya na sistemụ arụmọrụ. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị banyere ọkwọ ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ maka onye ntanetị Samsung.
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ASRock G41M-VS3 motherboard
The motherboard bụ ihe dị mkpa nke kọmputa. Ngwá ọrụ a na-achọkwa ndị ọkwọ ụgbọala, yana n'ihi atụmatụ nke ngwaọrụ, ọ bụghị otu, mana otu ngwanrọ nke software. Banyere ebe ị ga-achọ software maka ASRock G41M-VS3, anyị chọrọ ịgwa gị taa. Nbudata ndị ọkwọ ụgbọala maka ASRock G41M-VS3 Dị ka akụkụ ndị ọzọ nke PC, ị nwere ike ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka nke a na ọtụtụ ụzọ, anyị ga-akọwa nke ọ bụla n'ụzọ zuru ezu.
Ngwaọrụ ọ bụla iji rụọ ọrụ dị irè ịchọta software dị mma. HP DeskJet F380 Onye na-ebipụta ihe niile na-esiteghi. E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi chọta software niile dị mkpa. Ka anyị lee ha anya. Anyị na-ahọrọ software maka HP DeskJet F380 na-ebi akwụkwọ. Mgbe ị gụsịrị isiokwu ahụ, ị ​​ga-enwe ike ikpebi ụdị usoro ntinye software ịhọrọ, enwere ọtụtụ nhọrọ, nke ọ bụla nwere ma uru ma ọghọm.
Kwadoro ndị ọkwọ ụgbọala maka Lenovo IdeaPad 100 15IBY
Laptọọpụ Lenovo IdeaPad 100 laptọọpụ DIBY, dịka ngwaọrụ ọ bụla, agaghị arụ ọrụ ọ bụrụ na ọ nweghị ndị ọkwọ ụgbọala ugbu a. Banyere ebe ị nwere ike ibudata ha, a ga-atụle ya n'isiokwu anyị taa. Ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka Lenovo IdeaPad 100 15IBY Mgbe ọ na-abịa iji dozie nsogbu yiri nke siri ike dịka ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka kọmputa dị na kọmputa, enwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site n'otu oge.
Ebe ọkwọ ụgbọala maka Asus K56CB
Iji mee ka laptọọpụ ahụ rụọ ọrụ zuru ezu, ịkwesịrị ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile maka ngwaọrụ ọ bụla. Ọ bụ naanị n'ụzọ dị otú a ka a ga-akpọtụrụ sistemụ arụmọrụ na ngwaike dịka o kwere mee. Ya mere, ịkwesịrị ịmụta otú ị ga-esi budata ngwanrọ dị mkpa maka Asus K56CB. Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka Asus K56CB E nwere ọtụtụ ụzọ ị nwere ike isi wụnye ngwanrọ pụrụ iche na kọmputa gị.
Ụzọ nke ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka Logitech HD 720p kamera
Igwefoto weebụ, dị ka ngwá ọrụ kọmputa ọ bụla, ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa. Mgbe ị gụsịrị isiokwu a, ị ga-aghọta otu esi arụnye ngwanrọ maka ngwaọrụ Logitech. Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka kamera weebụ Logitech HD 720p Ọ bụla software mere maka kamera weebụ, na-egosipụta ike zuru oke ya, na-eme ka ọ rụọ ọrụ.
Ịhọrọ ọkwọ ụgbọala maka ụgbọala My Passport Ultra
Ngwaọrụ ọ bụla kwesịrị ịhọrọ onye ọkwọ ụgbọala n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji hụ na ọ dị mma. Taa, anyị ga-ajụ ajụjụ maka ebe ịchọta na otu esi arụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka draịvụ My Passport Ultra. Download ndị ọkwọ ụgbọala maka My Passport Ultra E nweghị otu nhọrọ nke a ga - eji chọọ chọọ ngwanrọ maka ụgbọala a kapịrị ọnụ.
Download na wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka HP Scanjet 2400 scanner
Ndị ọkwọ ụgbọala bụ mmemme pụrụ iche iji hụ na mmekọrịta nke sistemụ arụmọrụ na ngwaọrụ ejikọrọ na kọmputa. A ga-etinye isiokwu a iji nyochaa otu esi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka HP Scanjet 2400 scanner. Ịwụnye ngwanrọ maka HP Scanjet 2400 scanner Anyị nwere ike idozi ọrụ ahụ ma ọ bụ aka, site na ịga na saịtị nkwado HP, ma ọ bụ na-akpaghị aka, na-eji ngwanro arụ ọrụ na ndị ọkwọ ụgbọala.
Ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala ahụ maka Xerox Phaser 3010
Aha ụlọ ọrụ Xerox na CIS aghọwo aha ụlọ maka ndị na-emepụta ihe, ma ngwaahịa ndị a na-emepụta abụghị naanị ha - ọnụọgụ ahụ gụnyere MFPs na ndị na-ebi akwụkwọ, karịsịa Phaser akara, nke a na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ. N'okpuru ebe a, anyị na-akọwa ụzọ maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ Phaser 3010.
Onye nchịkwa Ethernet: yana akara edo edo, enweghị ohere na netwọk. Kedu otu esi achọpụta ihe nlereanya na ebe ibudata ọkwọ ụgbọala maka ya?
Ndewo Ọ bụrụ na enwere nsogbu na netwọk (ma ọ bụ kama nke ahụ, enweghi ike ime ya), ihe kpatara ya bụ otu nkọwa: ọ dịghị ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị netwọk (nke pụtara na ọ naghị arụ ọrụ!). Ọ bụrụ na ị mepee njikwa ọrụ (nke a na-adụ ọdụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ ntuziaka ọ bụla), mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ, ọtụtụ mgbe, ọ bụghị kaadị netwọk, nke dị iche nke akara ngosi odo ga-agbanye, ma ụfọdụ onye nchịkwa Ethernet (ma ọ bụ onye na-ahụ maka netwọk, ma ọ bụ onye nchịkwa Network, wdg).
Download ndị ọkwọ ụgbọala HP 620
N'ụwa taa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ike iburu kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ site na ọnụahịa ego kwesịrị ekwesị. Ma ọbụna ngwaọrụ kachasị ike agaghị adị iche na mmefu ego, ọ bụrụ na ịnweghị ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị maka ya. Onye ọrụ ọ bụla nke gbalịrị ịwụnye sistemụ arụmọrụ ya n'onwe ya abịawo usoro nhazi software.
Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka Epson L200
Mbipụta ọ bụla jikọọ na kọmpụta, dị ka ngwaike ọ bụla ọzọ, chọrọ ọkwọ ụgbọala arụnyere na sistemụ arụmọrụ, na-enweghị nke ọ gaghị arụ ọrụ n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụ na mpaghara. Epson L200 abụghị iche. Isiokwu a ga-edepụta usoro ntinye nke software maka ya.